Maalinta Aaas aaska Ciidanka Booliiska Somaliland. | Hargeysa World~Herald
Maalinta Aaas aaska Ciidanka Booliiska Somaliland.
UncategorizedMaalinta Aaas aaska Ciidanka Booliiska Somaliland.
Maalinta aas aaska ciidanka booliiska jamhuuriyadda Somaliland ayaa lagu qabtay Magaalada Hargeysa.
Waana sanad guuradii 28-aad ee ka soo wareegtay aas aaska Ciidanka Booliiska oo sanadkiiba halmar la xuso. Waxaa ka soo qayb galay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Wasiirka Arrimaha Gudaha Maxamed Kaahin Axmed, Taliyaha Booliiska Somaliland Maxamed Aadan Dabagale, iyo saraakiil kale duwan oo ka socda Ciidanka Booliiska, masuuliyiin tiro badan oo a socda xukuumadda, masuuliyiinta xisbiga Kulmiye, marti sharaf ka socota beesha caalamka.
Sidoo kale, Waxaa ka soo qaybgalay taliyayaasha Ciidanka Booliiska Jabuuti iyo Dawlad Deegaanka Somaali Itoobiya.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Maxamed Kaahin ayaa madasha ka hadlay waxaanu ugu horrayn hambalyeeyey ciidanka booliiska iyo shaqada ay u hayaan shacabka Somaliland. Isagoo bulshada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan booliiska marka ay hawl-galka ku jiraan, ayna la soo socodsiiyaan wixii dhibaato wada.
Waxa uu sidoo kale oo uu sheegay in wada shaqayn buuxda ay wada leeyihiin Ciidanka Booliiska Jabbuuti iyo Dawlad Deegaanka Soomaali Itoobiya. Iyaga oo ka wada shaqeeya in dadka danbiyada ka gaysta wadamadan in ay iska kaashadaan.